B2B Sale Executive | One Two Three Express ﻿
2.4.2022, အခ်ိန္ၿပည့္ , Transportation
ကုမၸဏီ: One Two Three Express
last-mile delivery service.
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီး သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသူ၊ အရောင်းပိုင်းအား အမှန်တကယ်စိတ်၀င်စားသူ ဖြစ်ရပါမည်။
•	စကားပြောပြေပြစ်၍ တိကျစွာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရမည်။
•	Negotiation skill ရှိရပါမည်။
•	B2B sale experience3yrs ရှိရမည်
•	Sale process ကို ကောင်း မွန်စွာသိပြီး result base working experience ရှိရမည်။
•	Challenge များကို ကြိုက်သောသူ self-initiative ဖြင့်လုပ်ဆောင် နိုငိသောသူဖြစ်ရပါမယ်။
•	Active listening.
•	Salary + Incentive
•	Office Hour (8:30-5:30)
•	Off Day - Sunday
94 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Transportation
97 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Transportation
•	Research and identify new business opportunities - including new markets, growth areas, trends, customers, partnerships, products, and services - or new ways of reaching existing markets •	Seek out the appropriate contact in an organization •	Foster and develop relationships with customers/clients •	Understand the needs of your customers and be able to respond effectively withaplan of how to meet these •	Think strategically - seeing the bigger picture and setting aims and objectives in order to develop and improve the business ...
B2B Sale Executive Sale & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon One Two Three Express Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Transportation ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ရွိအလုပ္မ်ား
Kayin State 64 ေန႔မ်ား